Igqabi lomthi elinebala eligqityiweyo - Moi Mili
Igqabi lomthi eligqabiweyo
Kwivenkile yethu ekwi-Intanethi ungathenga iisey enokubanjiswa ngesandla kunye ne-quillic eyenziwe ngamagqabi. Isebenza kamnandi njengendawo yokudlala kwasebusheni, inokuba yiraboli entle okanye iragi ebhedini.Ematrayitini enomtsalane isisixhobo esihle kwiintente ze-Moi Mili.
Imesile ethambileyo nekhululekileyo inokusasazeka naphina-kwigumbi lokuhlala, kwisikhenkcisi okanye egadini. Imithi yelinen enamagqabi enomthi iya kudibana kakuhle kunye nemicamelo kunye neenqwelomoya ezivela kwingqokelela yehlathi elifanayo. La manqaku enziwe enononophelo olukhethekileyo kwiinkcukacha.
Ingca yegqabi yabantwana "goji"
Amagqabi "apinki akhanyayo" abantwana
Ingca yegqabi yabantwana "papaya"
Igqabi lomthi labantwana "Mhlophe kwaye ngwevu"
"Morskie Oko" igqabi lomthi labantwana
"I-mustard" igqabi lomthi labantwana
Ingca yegqabi yabantwana "Ilineni yendalo"
"Grey" mat yegqabi yabantwana
Ingca enamagqabi abantwana "Ipinki epinki"